Pedicure Professional - Sidaad talaabo talaabo ugu samayn karto | Bezzia
Farsamaynta xirfadeed: Sida loo sameeyo tallaabo tallaabo
Susana godoy | 12/09/2021 20:00 | Quruxda
Ma rabtaa inaad hesho farsamo -yaqaan xirfadeed? Markaa ma jirto wax la mid ah inaad raacdo taxane talaabooyin aasaasi ah oo aad naftaada bilowdo si aad ugu raaxaysato gurigaaga. Sidaa darteed, waxaad yeelan doontaa waqti gaar ah naftaada, si aad ugu raaxaysato daqiiqad gaar ah oo aad ku gaadho natiijo ka fiican ciddiyahaaga, maxaa yeelay cagahaagu sidoo kale way u baahan yihiin.
Waa run in inta lagu jiro xilliga xagaaga inta badan waxaan siinnaa mudnaan dheeraad ah, laakiin xitaa haddii dayrtu timaaddo, waa inaanan u oggolaan inay baxsato. Sababtoo ah daryeelka cagaha sidoo kale waa aasaaska waana sababtaas awgeed, waxaan u baahanahay inaan sameyno sanadka oo dhan. Ha seegin sida loo sameeyo maxaa yeelay hadda wax walba waan kuu sheegaynaa.
1 Diyaarso qubeyska cagaha
2 Farsamo -gacmeed xirfadeed: Iska jar oo fayl ciddiyaha
3 Ka taxaddar cuticles iyo ciribta
4 Doorashada dhaldhalaalka
5 Taabashadii u dambaysay
Diyaarso qubeyska cagaha
Xaaladaha qaarkood mar walba ma aha tallaabada koowaad, laakiin annaga ayaa sidaas ah. Sababtoo ah sidan waxaan ka dhigi karnaa maqaarka mid jilicsan marka ay timaado ka takhalusida cilladaha qaarkood. Markaa, waxba ma aha sida biyo kulul oo yar oo ku jira weel weyn oo noo oggolaanaya inaan labada cag dhigno. Waxaad ku dari kartaa dhowr dhibcood oo saliidaha lagama maarmaanka ah si aad u ogaato jilicsanaanta oo dhan laakiin sidoo kale nasashada ugu fiican. Markaa, waa inaad sugtaa ilaa biyuhu ku dhowaadaan qabow. Markaa waxaad mar walba ka faa'iidaysan kartaa qabashada hawlaha kombiyuutarka ama wax kasta oo aad doorbidayso.
Farsamo -gacmeed xirfadeed: Iska jar oo fayl ciddiyaha
Ka dib markaad maydhato oo aad qalajiso cagahaaga, waa waqtigii loo aadi lahaa hagaajinta ciddiyaha. Xusuusnow inay fiican tahay inaadan siinin qaabab wareegsan maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo jidhka ku jira, laakiin waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato goyn dheellitiran, si hadhow marka ay timaaddo midabku ay u ekaato mid aad u badan. Dabcan, marka lagu daro goynta lafteeda, waxaad u baahan tahay inaad fayl garaysato. Maadaama tallaabadani ay lama huraan tahay in la awoodo in la tirtiro qaybo qalafsan ama geesaha had iyo jeer soo baxaya.
Ka taxaddar cuticles iyo ciribta
Gooyuhu waa qayb kale oo muhiim u ah labada gacmood iyo cagaha.. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho haddii aadan rabin inaad ka saarto. Waxa aad samaynayso waa inaad mid kasta dhawr dhibcood oo saliid ah mariso. Si aan iyaga u jilcinno. Ka faa'iidayso oo duug lugta oo dhan, adoo xoogga saaraya qaybta cidhibta. Sababtoo ah waa mid kale oo na siin karta dhibaatooyin oo u muuqan kara dildilaacyo qaarkood. Markaa, waxaad u baahan tahay inaad dalbato biyo -waraabis oo aad u tagto dhagax -boodh si aad u sagootiso maqaarka dhintay. Markaad dhammaysato, mari kareemka qoyaanka.
Mararka qaarkood waxaan ku dhejin karnaa rinjiga ciddiyaha marka aysan lahayn dhammaystir joogto ah. Haddii kale, hadda waad ku sharaddi kartaa tallaabada ugu dambeysa, taas oo ah adeegsiga midabka. In kasta oo wax yar uun ka hor, waa inaad ku dartaa lakab ilaaliya oo aad qalajisaa. Waxay noqon doontaa waqtigii la dooran lahaa midabka dhaldhalaalka. Waxaad samayn kartaa naqshad siman ama waxaad siin kartaa taabasho mala -awaal oo aad u aadi kartaa naqshad hal -abuur leh, tusaale ahaan, ciddiyaha suulka weyn. Wax kasta oo aad dooratid, rinjiyee oo u oggolow inay si buuxda u engegaan. Markaad engegto, waxaad u baahan tahay inaad dalbato lakab dhalaalaya si aad natiijada uga dhigto mid aad u yaab badan oo sii dheeraata.
Taabashadii u dambaysay
Mar haddii aan dhaldhalaal dhalo, waa run in aan si fiican u qalajinno. Laakiin waxaa jira talaabadii ugu dambaysay oo ay tahay inaan weli qaadno oo ah, mar kale ayaan u baahanahay sharad ku mari lakabka huurka huurka oo dhan. Waa run inay hore u ahayd tallaabo aan qaadnay laakiin ma noqon doonto tii ugu dambaysay. Fuuqbaxa badan, ayaa ka sii fiican markaa waa waqtigii la sharadayn lahaa. Hadda waxaad yeelan doontaa pedicure xirfadle ah si aad awood ugu yeelatid inaad ku dhaqanto goor kasta iyo meel kasta oo aad rabto. Waa hubaal inaysan noqon doonin mid cakiran sida ay u muuqan lahayd!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Farsamaynta xirfadeed: Sida loo sameeyo tallaabo tallaabo
Indha -indheynta: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Furayaasha yareynta walaaca